युरोपा लिगमा लेस्टरको खराब लय जारी (भिडियोसहित) – Khel Dainik
साविक विजेता काठमाडौं–११ माडी गोल्डकपको फाइनलमा • नेपाली टिमबाट बाहिरिए सोमपाल र बिनोद • २०औं आहा! रारा गोल्डकपमा एपिएफको विजयी शुरुवात • हारेर पनि माजिया प्रेसिडेन्ट कपको फाइनलमा • एपिएफ च्याम्पियन, आशिफ बने सर्वोत्कृष्ट •
युरोपा लिगमा लेस्टरको खराब लय जारी (भिडियोसहित)
आश्विन १५, २०७८ | (PostaComment)
एजेन्सी । युरोपा लिगमा खराब लयमा देखिएको लेस्टर सिटीले समूह चरणतर्फ आफ्नो दोस्रो खेलमै हारको सामना गरेको छ । समूह सी मा रहेको लेस्टरले बिहीबार राती पोलिस क्लब लेजिया वार्सासँग १–० को साँघुरो हार बेहोर्न बाध्य बन्यो ।
वार्साको घरेलु मैदानमा सम्पन्न खेलमा पहिलो हाफर्त ३१औं मिनटमा माहिर इमरेलीले गरेको एक मात्र गोल लेस्टरलाई निराश बनाउन प्रर्याप्त बन्यो । समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा लेस्टरले इटालियन क्लब नापोलीसँग २–२ को बराबरी खेलेको थियो ।
त्यस्तै बिहीबार नै भएको समूह सी तर्फको अर्को खेलमा स्पार्टक मस्कोले नापोलीलाई ३–२ ले हरायो । समूह सी मा लेस्टरलाई हराएको वार्सा ६ अंकका साथ शिर्ष स्थानमा छ । ३ अंक जोडेको मस्को दोस्रो स्थानमा रहँदा १–१ अंक जोडेका नापोली र लेस्टर क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् ।
← युरोपा कन्फिरेन्स लिगमा केनको ह्याट्रिक (भिडियोसहित) युरोपा लिगः वेस्ट ह्यामलाई लगातार दोस्रो सफलता →
आर्मी र गण्डकी सेमिफाइनलमा आश्विन १५, २०७८
अर्घाखाँची रोड रेस सर्यो आश्विन १५, २०७८
अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोकको पदोन्नती आश्विन १५, २०७८
साविक विजेता काठमाडौं–११ माडी गोल्डकपको फाइनलमा आश्विन १५, २०७८
नेपाली टिमबाट बाहिरिए सोमपाल र बिनोद आश्विन १५, २०७८
२०औं आहा! रारा गोल्डकपमा एपिएफको विजयी शुरुवात आश्विन १५, २०७८